Miro midho leh, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Masiixu waa geedka canabka ah, annaguna waxaan nahay laamihii! Canab ayaa loo gooyay inay khamri sameyaan kumanaan sano. Kani waa nidaam fasiraad ah maxaa yeelay waxay u baahan tahay saynis khibrad leh, ciid wanaagsan iyo waqti ku habboon. Beerta canabka ah way wada ruxmadaa oo nadiifisaa canabkiinna, oo waxay fiirisaa midhihiisa canabka ah si loo go'aamiyo wakhtiga saxda ah ee goosashada. Waa shaqo adag, laakiin haddii wax waliba ay iswaafaqaan, waxay u qalanaysay dadaal. Ciise wuu garanayay khamriga wanaagsan. Mucjisadiisii ​​ugu horaysay waxay ahayd inuu biyo u rogo khamri ugu wanaagsan ee abid dhadhamin. Waxa isaga ka muhiimsan ayaa ka badan intaas Injiilka Yooxanaa waxaan ku akhrinaa sida uu u sharxayo xidhiidhkiisa midkeen kasta: «Anigu waxaan ahay canabka dhabta ah aabbahayna waa ninka canabka ah. Wuu iga rujin doonaa geed kasta oo canab ah oo aan midho lahayn. oo mid kasta oo midho dhasha ayaa nadiifin doona si ay midho badan u noqoto. (Yooxanaa 15,1-2).
Sida geed canab ah oo caafimaad qaba, Ciise wuxuu ina siiyaa qulqulka joogtada ah ee aabihiis oo wuxuu u dhaqmaa sidii nin canab ah oo garanaya goorta iyo meesha ay tahay inay ka qaaddo laamaha aan caafimaadka qabin, si aan si xoog leh ugu korayno oo aan u diidno jihada saxda ah. Dabcan, isagu wuxuu sameeyaa si aan u dhalaan midho wanaagsan. - Waxaan ku guuleysanaa midhaheena jiritaanka Ruuxa Quduuska ah nolosheena. Waxay isu muujineysaa: jacayl, farxad, nabad, dulqaad, naxariis, roonaan, daacadnimo, qabownimo iyo is-xakameyn. Sida khamri wanaagsan, habka loo beddelo nolosheena, weelka jaban ilaa shaqada badbaadada, waxay qaadataa waqti dheer. Wadadani waxay ku lug yeelan kartaa khibrado adag oo xanuun badan. Nasiib wanaagse, waxaan haysannaa dulqaad, caqli, iyo badbaadiya badbaadiyayaal oo isagu ah geed canab ah iyo khamri khamri ah oo ku hoggaamiya hawsha badbaadadaada nimco iyo jacayl.